Avast Home Edition - MYSTERY ZILLION
June 2009 edited September 2009 in Antivirus & Virus
:103::103: ကျွန်တော့်အိမ်ကစက်မှာဗျာ Avast Home Edition 4.0 သုံးတယ်ဗျာ သူက အလကား
လည်းရတယ် :D အပ်ပဒိတ်လည်းလွယ်တယ်ဗျာ အကောင်တော်တော်များများလည်းမိတယ်ဗျာ
ဒါနဲ့သုံးရော တစ်ရက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီက သီချင်းတွေ ဒေတာတွေလိုချင်တာနဲ့ ကိုယ့်
ဟက်ဒစ်ကြီးကိုဖြုတ်ကြီး ကူးထည့်လိုက်တာ ဒေတာတွေ အားပါးပါး :2::2::2: အဲ့မှာစတာဗျို့
သူများဟာကို လိုချင်စောနဲ့ကူးတာလေ :106::106::106:
Avast ရဲ့ Interface မှာ Update ဆိုတဲ့နေရမှာ နောက်ဆုံးအပ်ပဒိတ်လုပ်တဲ့ရက်တွေမပြဘဲနဲ့
ပေါက်တက်ကရ စာတွေပေါ်လာတယ် စာမဟုတ်တဲ့စာတွေဗျာ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမသင်ကာလို့
ဖိုဒါ အော်ပရှင်လဲ ကြည့်ေ၇ာဟစ်ဒန်းဖိုင်တွေမတွေ့ရတော့ဘူး
Avast ကိုအပ်ပဒိတ်လုပ်ရင်လဲ အယ်ရာတွေပြတယ် ဗားရှင်းမတူပါတို့ ဘာတို့ညာတို့ဆိုပြီးပြတယ်
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဖြုတ်မယ်ဆိုပြီး အက်အော ရီမုထဲသွား သူ့ကိုလဲ ရှာဖြုတ်မယ်လဲလုပ်
ရော စတာ အဲ့မှာစတာဗျာ (:((:((:((:((
Avast ကိုလုုံး၀မတွေ့တော့ဘူး ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူး ရစ်ဂျစ်စတီ ထဲ၀င်ဖြတ်တာလည်းမရဘူး လုပ်ကြပါဦး ဗျာ ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ အဲ့
Avast installer ဖိုင်နဲ ့ပဲ remove ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား...
အဲလိုပုံစံ မျိုးနဲ ့ဆို အဆင်ပြေမယ်လို ့ထင်တယ်ဗျာ....
အရင်ဆုံး safe mode ကို သွားပြီး system resote point တွေရှိပါလိမ့်မယ် ရွေးပြီး လုပ်ကြည့်ပါဦး point တစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခုကို ရွေးပြီး လုပ်ကြည့်ပါဦး .. သေချာတာက တော့ virus ကြောင့်ဆိုတာပါ.. free Editon တော်တော်များများဟာ မိတော့ မိပေမဲ့ အပြီးမရှင်းပေးနိုင်တာတွေက များပါတယ်..
Bro ဖြစ်တာမျိုး ကျနော့် ရုံးမှာ ဖြစ်ဖူးတယ်။
ကျနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံကိုပြောပြမယ်ဗျာ ........
၁. Safe Mode ထဲ၀င်လိုက်ပါ။
၂. C:\_ အောက် . ဒါမှမဟုတ် C:\_Program files\_ အောက် မှာ Avast Folder ရှိတယ်။ အဲဒါကို Shift+Del လုပ်ပစ်လိုက်။ ( Normal Windows Mode မှာဆို Program က Run နေတော့ ဖျက်လို့မရဘူး )
၃. Registry ထဲ၀င်ပြီး Avast ကိုရှာ ပြီး အကုန်ဖျက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို ... ကျနော်စက်မှာတော့ လုံး၀ ရှင်းသွားတယ် Bro.
အဆင်ပြေပါစေဗျာ ......... :6:
အလကားရတာကို သုံးချင်တာဆိုရင် ...
AVG & Antivir ကိုတွဲတင်ထားပြီးသုံးစေချင်ပါတယ် ။ Anti-Virus တွေက တစ်မျိုးထဲနဲ့တော့သိပ်မထိရောက်ဘူး။ အထူးသဖြင့် Free တွေပေါ့။
တစ်မျိုးထဲနဲ့ ပဲစိတ်ချလက်ချသုံးချင်ရင်တော့ .... BitDefender , Kaspersky တွေသုံးဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျာ ......... :67:
avg နဲ့ avast တွဲသုံးရင်လေးမှာပေါ့နော်... ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့ ကက်စပါစကီးလေးပဲကောင်းတယ်.. ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းက စက်တွေလဲ AVAST သုံးတယ်.. ဗိုင်းရပ်စ်လဲ များလာရော သူမနိုင်တော့တဲ့အပြင် သူ့ကို ဖြုတ်ပြီး ကက်စပါတင်မလို့ဟာတောင် တင်ဖို့ ဖြုတ်မရဘူး.. avast က ဖြုတ်ရင် သိပ်ဒုက္ခပေးတတ်တာကလား..
avast update www.avast.com/eng/updates.html
ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်.. ကို Alexander ပြောသလိုပဲ လုပ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျ..
Normal Windows မှာအရင်ဖြုတ်တာ ပြုတ်တယ်... စက် Restart ပြန်တက်လာတော့ သူက Run နေတုန်းပဲ ...Add or Remove မှာကော .. Revo Uninstaller မှာကော.. Your Uninstaller မှာတွေကော ပရိုဂရမ်က မရှိတော့တာနဲ့ Safe Mode ကနေပဲ၀င်ပြီး Shift + Delete နဲ့ ကစ်လိုက်ရတယ်...